सेल्फी लिने लतले गुम्यो चर्चित मोडलको ज्यान, फ्यानहरु शोकमा..? | Rochak
July 16, 2021 NepstokLeaveaComment on सेल्फी लिने लतले गुम्यो चर्चित मोडलको ज्यान, फ्यानहरु शोकमा..?
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालका विना अहिले मानिसको जिवन असम्भव हुन थालिसक्यो । आफन्तहरुसंग टाढिदै गएको नयाँ पुस्ता सामाजिक सजालमा भुल्न थालेका छन् । यसैमा फोटो सेल्फी पनि एक लत हो ।
अनेकथरी तस्बिर लिने र सामाजिक सजालमा पोष्ट गर्ने लतका कारण एक चर्चित मोडललले भने ज्यान गुमाएकी छन् । उनलाई सेल्फीको लत यति सम्म लागेको थियो की उनी ठूलो जोखिम उठाउँथिन् ।
३२ वर्षीया सेफिया सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय भएका कारण उनका फलोअर पनि निकै धेरै थिए । आफ्ना फ्यानहरूलाई प्रभावित पार्न सेल्फी लिन लागिरहेकी थिइन् । सोही क्रममा उनी उच्च स्थानबाट खसिन् र उनको निधन भयो ।
सोफिया शनिवार आफ्ना साथीहरूसँग हङकङको एक नेचर पार्क घुम्न गएकी थिइन् । सोही क्रममा उनी खसेकी थिइन् । उनलाई नजिकको अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले उनलाई मृ त घोषित गरे । घटना ‘हा पाक लाई’ भन्ने पार्कको पाइनएप्पल माउन्टेन नजिक भएको थियो ।
काम खोज्दै ट्रकमा लिफ्ट मागेर काठमाडौवाट वुटवल हिँडेकी १९ वर्षकी युवतीलाई ट्रकभित्रै…?